DF oo u dabaaldegtay ku guuleysiga xilka golaha loo dhanyahay ee QM
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey shacabka iyo Goleyaasha DFS guusha taariikhiga ah ee dhanka diblumaasiyadda, kaddib markii dalkeenna loo doortay Guddoominta Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Soomaaliya oo looga dhawaaqay kiisas cusub oo Covid-19 ah
Soomaliya 12.04.2020. 19:00
Muqdisho ayaa hogaamineysa magaalooyinka dalka ee cudurka uu si aayar ah ugu faafayo.
Bayaan "Qaylo-dhaan Qaran ah" kana dhan ah Farmaajo oo lasoo saarey
Soomaliya 03.07.2020. 17:45
Farmaajo oo eryay gudoomiye ku xigeeno ka tirsanaa gobolka Banaadir
Soomaliya 26.04.2020. 19:00
Farmaajo oo loo diray warqad walwal looga muujiyey xaalada jira
Soomaliya 07.05.2020. 09:40
Farmaajo oo muddeeyay shirka madaxda DF iyo maamuladda
Soomaliya 25.06.2020. 00:11
Farmaajo oo lagu booriyey "in uu saxo" hadal uu jeediyey oo dood dhaliyey
Soomaliya 22.04.2020. 07:15
Villa Somalia oo taageero u goobeysa Farmaajo kadib sawirkii la gubay
Soomaliya 27.04.2020. 13:05
Madaxweynaha Brazil oo shaaciyey in laga helay safmarka Covid-19 07.07.2020. 19:30